जिन्दगीले धेरै सिकायो : पिंकी मोक्तान (फोटोफिचर) – Puleso
जिन्दगीले धेरै सिकायो : पिंकी मोक्तान (फोटोफिचर)
‘मिसेस तामाङ २०१८’ का प्रतियोगी तथा व्युटिसियन
पिंकी मोक्तान (तामाङ) फोटोफिचर)
जीवनप्रति सधै सकारात्मक सोच राखेर हिड्ने पिंकी मोक्तान मिसेस तामाङ २०१८ मा प्रतिस्पर्धा गर्दै छिन् । उनी उमेरले ३७ बसन्तमा हिड्दैछिन् तर भर्खर २८- ३० वर्षको जस्तो देखिन्छिन् । जतिवेला पनि हँसिलो देखिने पिंकी कुशल ब्युटिसियन पनि हुन् । उनको जीवनमा पनि थुप्रै दुःखहरु नआएको होइन, तर मरेर जाने जिन्दगी भनेर उनले धेरैजास्तो दुःखलाई हाँसेरै उडाइन् । तर केही मान्छेको जीवनमा केही पीडा यस्ता हुन्छन्, जसलाई कटाउन रोइदिनुपर्छ । धक खोलेर रोइदिनुपर्छ । पिंकीले पनि रोइदिएर पीडा भूलेका थुप्रै क्षणहरु छन् ।
१५ वर्षकै उमेरमा प्रेम बिबाह गरेकी पिंकीले आफ्नो जीवन साथीसँग सधै साथ रहेर जीवन कटाउने कसम खाएकी थिइन् । तर समस्याले सँगै बस्न दिइन र उनको श्रीमान विदेशमा छन् । उनी जीवनसाथीको सम्झनामा कहिलेकाही ‘सुन साँइली चालिस कटेसी रमाउँला ‘भन्ने गीत सुनेर एक्लै भएको बेलामा बेसरी रोइदिन्छिन् । उनी भन्छिन कहिलेकाही रुनु पनि पर्दो रहेछ ।
उनी सधै सक्रिय जीवन विताउन चाहन्छिन् । उनी भन्छिन् रमाउँदा रमाउँदै मर्न पाइयोस् । उनै पिंकीसँगको कुराकानीको छोटो अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
मिसेस तामाङ के हो ?
मिसेस तमाङ एउटा यस्तो प्रतियोगिता हो, जसमा विवाह भैसकेका तामाङ नारीहरुबीच विभिन्न क्षमता र कलाहरुको प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यो आफ्नो जातीको भेषभूसा, भाषा र कला संस्किृतिको संरक्षण र विकास गर्ने अभियान हो । विबाहित तामाङ नारीहरुको लागि यो अवसर हो । जीवनमा केही गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँने एउटा रंगमञ्च हो ।
मिसेस तामाङ शारिरीक सौन्दर्यको प्रतियोगिता हो कि प्रतिभाहरुको ?
यो प्रतिभा र शारिरीक सौन्दर्य दुवैको प्रतियोगिता हो । विबाहित महिलाहरुको प्रतियोगिता भएकाले पनि यसमा शारिरीक सौन्दर्यको मात्र प्रतिस्पर्धा हुँदैन तर शारिरीक सुन्दरता पनि त्यतिकै महन्वपूर्ण छ । आफ्नो जातीको कला संस्कृति झल्किनु यस प्रतियोगितामा निकै जरुरी छ , त्यो त रुपमै देखिने हो ।
तपाईको भोगाईमा सुन्दरता के हो ?
झलक्क हेर्दा सुन्दरता भनेको रुप नै हो जस्तो लाग्छ । फुलहरु पनि हेर्दा बाँसना नआएपनि सुन्दरै लाग्छ तर सुगन्ध दिने फुलकोसुन्दरता आँखाका लागि माात्र हुँदैन, मनका लागि पनि सुन्दर हुन्छ । त्यसकारण मेरो विचारमा वास्तविक सुन्दरता भनेको रुप मात्र होइन, मन, भावना र सोच पनि सफ-सुन्दर हुनुपर्छ ।
नारी र श्रृंगारबीच के सम्बन्ध छ जस्तो लाग्छ ?
नारी सुन्दरताको पर्यायवाची नाम हो, प्रकृतिको उपहार हो । श्रृंगारको अस्तित्व नै नारीसँग गाँसिएको छ ।
तपाईलाई कस्ता गीतसंगीतहरु मन पर्छ ?
लोकगीत पनि धेरै मन पर्छ । तर एक्लो हुँदा सेन्टिमेन्टल गीतसंगीत सुन्दा सारै आनन्द आउँछ ।
प्रेम परेका दिनहरुलाई सम्झिदा कस्तो अनुभव हुन्छ ?
अहिले आएर हेर्दा त्यतिबेला त प्रेमभन्दा पनि आकर्षणमा विवाह भएको रहेछ भन्ने लाग्छ । वास्तविक प्रेम त विवाह पछि भयो । सानै उमेरमा विवाह भएकाले पनि होला । अझ मलााई उस्को (श्रीमान) माया कति लाग्दा रैछ भन्ने फिल त ऊ विदेश गएपछि भयो । आकर्षण र प्रेम फरक कुरा रहेछ ।
कहिले काहिँ तनाव भयो भने के गर्नु हुन्छ ?
म्युजिक सुन्छु । शान्त ठाउँमा गएर बस्छु ।
कुुनै एउटा ठाउँ बताइदिनु न, जहाँ गएर बस्दा तपाईको तनाव हराएको थियो ?
सुन्दा अचम्म मान्नुहोला, धेरै तनाव भयो भने पशुपति जान्छु । लासहरु पोलेको हेर्छु । त्यो हेरोपछि मान्छेको जिन्दगी के नै छ र भन्ने फिल हुन्छ । अन्तिममा जाने बाटो त्यहि हो भन्ने लाग्छ र मन बुझ्छ ।
मेरेपछि मान्छेको नाम हराउँछ । लास उठाएर लान हतार हुन्छ । जीवनको अन्त्य मृत्यु हो । तनावमा बस्नुभन्दा त्यसलाई छाडेर रमाउनु धेरै राम्रो कुरा हो जस्तो लाग्छ । आर्यघाटले मलाई धेरै कुरा सिकाएको छ । आत्मज्ञान दिएको छ जस्तो लाग्छ ।
दुःख पर्दा कसलाई सधैभन्द बढी मिस गर्नुहुन्छ ?
विस्वास हो । मायाले मात्रै यो धानिदैन विस्वास भएन भने ।
विवाह नी ?
विवाह यस्तो सम्बन्ध हो, जसमा राम्रो र नराम्रो दुबै स्वीकारेर सँगै हिड्ने आँट गर्नुपर्छ । यसमा श्रीमान र श्रीमति दुवैको उक्ति कै भूमिका हुन्छ । त्यसकारण विवाह सम्झौता हो । सहमति र विस्वास हुँदासम्म यो टिक्छ ।
तपाईले जीवनमा सबैभन्दा धेरै पढ्नुभएको कुरा के हो ?
मैले जीवन सबैभन्दा धेरै र गहिरो गरी पढेको कुरा जिन्दगी हो । जति सिकायो यहि जिन्दगीले सिकायो ।
पब्लिक स्पिकर नेपाल सिजन २ को उपाधि धरानका रमेश प्रसाईंलाई
काठमाडौं : एपीवान एचडी टेलिभिजनबाट प्रशारण भइरहेको पब्लिक स्पिकर नेपाल सिजन २ को उपाधि धरानका रमेश प्रसाईंले जितेका छन्। ‘अब बोल्छ विस्तृतमा...